Baalayaal Hor leh oo Miinooyin ku xiran lagu arkay iyo Cabsi tii ugu darneed oo taagan maanta. |
Baalayaal Hor leh oo Miinooyin ku xiran lagu arkay iyo Cabsi tii ugu darneed oo taagan maanta.
Waxaa hakaday dhamaan dhaq-dhaqaaqii wadada Maka Al-mukaramagaar ahaan inta u dhexeysa Sayidka iyo Dabka kadib markii la arkay balaooyin badan oo Miinooyin lagu rakibay kuwaas oo laga cabsi qabo in ay qarxaan.
Baalayaasha Miinooyinku ku xiranyihiin oo ah kuwa Cad-ceeda ku shaqeeya ayaa waxa ay kala yihiin Baalaha 30-aad, 28-aad iyo 27-aad iyada oo horay loo qarxiyay baalaha 29-aad oo uu dhulka yaallo halka agagaarka Isgoyska Shaqaalahana subaxnimadii hore ee saaka baalle kale lagu qarxiyay.
Baalayaashaan oo qaraxyada ku xiran ay yihiin kuwa lagu dhejiyay ayaa waxa ay cabsi tii ugu darneed geliyeen dadka deegaanka iyada oo aysan jirin wax dhaq-dhaqaaq ganacsi iyo isu socodka dadka oo ka jira halkaasi iyada oo shaqsi waliba oo deegaankaasi ku sugan uu ku jiro halkii waagu ugu baryay.
Lama oga sida loogu guuleysan doono bad-baadinta baalayaasha qaraxyadu ku xiranyihiin iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in qaraxyadu ay yihiin kuwa waqti ku saleysan oo ay waqti kasto suura gal tahay in ay qarxaan.